झिनियाबाट करोडौँको आम्दानी - Nayapul Online
ltxf/df ( nfvsf] lemlgof /f]6Lsf] Jofkf/ u'NdLsf] jfdL 6S;f/ If]qsf g]jf/ ;d'bfon] lemlgof /f]6Lsf] Jofkf/af6 /fd|f] cfDbfgL ul//x]sf 5g . tl:a/ M sf}/a vqL, u'NdL, /f;;
Caverta online, order dapoxetine. असोज २५, दसैं तथा तिहारका बेला चामलको पीठोबाट उत्पादित झिनिया रोटीको कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। हिन्दुहरूको महान् पर्वहरूमा रोटीको विभिन्न परिकारमध्ये एक झिनियारोटीको प्रयोग हुन थालेपछि महिलाहरूको आम्दानीमा पनि वृद्धि भएको छ।
पाल्पा तानसेनको टक्सारमा उत्पादित झिनिया रोटी चामलको पीठोलाई पकाएर मसिना प्वाल भएको साँचोबाट पीठोको रेसा निकालिन्छ। त्यसलाई चाउचाउ जस्तै गोलो आकारमा निर्माण गरी २–३ दिनसम्म घाममा सुकेपछि झिनिया बजारमा बेच्न योग्य हुने गर्दछ। तानसेनको टक्सारमा उत्पादित झिनियाले तिहारका बेला राम्रो बजार पाउँदा झिनिया उत्पादन गर्ने यहाँका महिलाको आयआर्जन समेत बढ्न थालेको छ। फुर्सुदका बेला झिनिया उत्पादन गर्दै आएका महिलाले दर्जनको २ सय ५० रुपैयाँमा साना साइजका झिनिया बेच्दै आएका छन्। एक दर्जन ठूला साइजकाझिनियालाई ३ सयदेखी ५ सय रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ।
टक्सारटोलकी झिनिया व्यवसायी कमलादेवी श्रेष्ठ भन्छिन्, दसैं र तिहारका समयमा माग उच्च हुन्छ। अन्य समयमा यसको न्यून रुपमा प्रयोग हुने भएतापनि शहरमा यसको माग भने भइरहेको छ। तिहारमा दाजुभाइलाई टीका लगाइदिएपछि रोटीका रुपमा झिनिया तेलमा फुराएर सेलरोटी, फिनी रोटीसँगै खुवाउने चलन रहेकाले झिनियाको कारोबार उच्च हुँदै गएको हो। पाल्पाबाट उत्पादित झिनिया गुल्मी, स्याङ्जा, पर्वत, रुपन्देही, अर्घाखाँची, नवलपरासी, कपिलवस्तु, कास्की, तनहुँलगायतका जिल्लामा ठूलो मात्रमा आयात हुँदै आएको झिनिया व्यवसायी बताउँछन्।
जिल्लामा झिनियाको व्यवसायमा दुई सय भन्दा बढी महिलाले रोजगार पाएका छन्। जिल्लाभर वार्षीक झण्डै १ करोडको झिनियाको कारोबार हुने गरेको पाल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव यादव कार्की बताउँछन्।